Indlela yokupheka pepper enezinto ezithintekayo? Izinketho zokupheka
Indlela yokupheka pepper enezinto ezithintekayo? Wonke umama womndeni unempendulo yakhe kulo mbuzo. Into esemqoka ekulungiseleleni kwayo ukugcina imithetho eyisisekelo. Isibonelo, udinga ukwazi kahle ukuthi ukupheka isikhathi eside kangakanani ukupheka izipelepele. Konke kuxhomeke kuloluphi umkhiqizo (fresh noma frozen) oyisebenzisayo, inyama yokugxilisa noma imifino futhi, ekugcineni, endleleni yokupheka.
Kunezindlela zokupheka ezimbili eziyinhloko. Ukupheka pepper emanzini noma ukubhaka kuhhavini. Okukhethwa nguwe kuwe.
Ngokuqondene nokugcwaliswa, kungaba inyama ngokufaka irayisi nemifino noma imifino. Ngokwemvelo, ukhetho lokuqala luzobe lulungele isikhathi esincane kunesibili. Futhi okuningi: ungakhohlwa ukuthi ukudla okufriziwe nakho kudinga isikhathi esiningi ukupheka. Isikhathi sendabuko, emva kwalokho i-pepper ehlongoziwe iyofaneleka ukudla, imizuzu engu-30-40.
Ake siphendule izindlela zokupheka. Ngokuvamile ukugcwaliswa kwenyama kuqukethe inyama enobuthi, ilayisi nemifino. Abanye bakhetha ukwengeza izaqathe zangaphambi kokuthosiwe kanye no-anyanisi ngqo kumhluzi, bese uxuba ukugxila ukuze wenze ngaphandle kwemithi yemifino. Uma kungekho irayisi, ingashintshwa yi-oat flakes noma ibhali. Into esemqoka - ungathathwa futhi ungangezi okuningi.
Ukuhlanganiswa kwemifino ukugcwalisa kuyehluka ngokuya kokutholakala kwemikhiqizo. Ehlobo kukhona cishe akukho mingcele. Ebusika, ungazama: isibonelo, engeza ilayisi ku-anyanisi, izaqathe namakhowe. Kuyinto elula kakhulu. Futhi nenye enye inguqulo yokugcwalisa: ilayisi, izaqathe ezithosiwe, anyanisi, i-zucchini (isitshalo seqanda), imifino kanye nezinongo ngokuqonda kwakho. Azikho izindlela zokupheka ezichaza ukuthi kufanele upheke kanjani uphepele oqoshiwe kahle. Noma yikuphi ukuhlukahluka kungacatshangwa okulungile uma imodi yesikhathi yokupheka ibonakala.
Nanka amanye amathiphu ekupheka uphepele oqoshiwe. Ngesikhathi upheka le dish, thumba amazambane ngokufana. Ukunikezwa okuhlangene kwepelepele kanye namazambane kuyindlela eyanelisayo futhi enenzuzo. Ukupheka pepper ngesiBulgaria kuhhavini, ungabeka phezu kweyayonnaise yokugcwalisa (ukhilimu omuncu) uphinde ufafaze ushizi. Isidlo sizoba nomnandi futhi sijabulise.
Amaphikishi ahluke ngokuvumelana nendlela yokugqoka. Isibonelo, inketho yendabuko ihilela ukusika ucezu lwesipepu nge "umsila", nakuba ungakwazi nje ukusibekela ngesigamu, eduze. Yiqiniso, le nketho ifaneleka kakhulu ekubheni kuhhavini, ngoba uma ukupheka emgqeni ukugcwaliswa kungase kuvele.
Manje mayelana nomhluzi. Indlela yokupheka pepper enezinto ezithintekayo? Yini ongayisebenzisa ukuze wenze umhluzi? Abaningi, ngaphandle kokuziphazamisa ngokwabo, babilise imifino nje emanzini anosawoti, futhi abanye bengeze izaqathe ezithosiwe, anyanisi kanye utamatisi (utamatisi unamathele). Empeleni, zombili izindlela zifanele ukusetshenziswa. Ungakhohlwa ukuthi ngokuthululela amapropele udinga ukusebenzisa amanzi abilayo.
Uma ukhonza isidlo esilungile, ungangeza ukhilimu omuncu noma imayonnaise bese ufafaza imifino yemifino. Ibukeka sengathi iyathandeka, kodwa iyakuthanda ukubopha iminwe yakho!
Manje uyakwazi ukupheka oqoshiwe we-pepper, futhi qinisekisa ukujabulisa abathandekayo bakho ngendlela yokuqala yokupheka.
I-Carp ku-grill. Iresiphi yokupheka
Kuyini iChimichang? Iresiphi
Iresiphi yesaladi lesiFulentshi ngezikhathi zonke
I-Gnocchi - iresiphi yamadombolo ase-Italy
Inkukhu ethosiwe. I-iresiphi yenkukhu ebisiwe ngesithombe
Mihail Porfirevich Georgadze - UNobhala we KaHulumeni of the Supreme Soviet of the USSR. A uhambo olufushane ku biography.
UBarbara Radziwill: Biography, portrait, legend
Bursa - igama lesikole zenkolo ezinsukwini ubudala nangale. elisho
Kuyini ammonia? Formula izakhiwo kanye ammonia
Dinosaurs safa? Lapho izibankwakazi saphela?
Khulisa Ukudla: ukubuyekezwa, zinhlobo Ukwakheka, ukusebenza kanye nemiphumela
Ngubani Stiven Hoking? Life kanye umsebenzi uStephen Hawking
Sexy and kuqondile Vasilisa frolova: Biography umethuli
Iholide Ideal eGibhithe: Domina Coral Bay Harem 5